एकेडेमीमा कस्ता–कस्ता आए ?
18th June 2019, Tuesday
स्वास्थ्यका दर्जनौं उपकरण प्रयोगविहीन, करोडौं रकम स्वाहा
होला त काठमाडौं धूलोमुक्त ?
माननीयमाथि यत्रो बात
भ्रष्टाचार दाग नमेटिँदै तस्करी
१ खर्वभन्दा वढी लगानीका ठेक्का सम्झौता अलपत्र
कहाँ चुके रवीन्द्र ?
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूनिकटका स्रष्टाहरूलाई मात्र समेटेर गठन गर्ने आशंका व्याप्त रहे पनि केही दिनअघि पूर्णता पाएको नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा अरू विचारमा बाँधिएका अनुहारहरू पनि परेका छन् । सत्तारूढ नेकपादेखि नेपाली कांग्रेसनिकटका लेखक–साहित्यकारहरूसमेत नवगठित प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा अटाएका छन् ।
कुलपतिमा गंगाप्रसाद उप्रेती र सदस्य–सचिवमा जगतप्रसाद उपाध्यायको नियुक्ति भएको करिब एक महिनापछि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले पूर्णता पाएको हो । कुलपतिमा उप्रेती दोहोरिएका हुन् भने सदस्य–सचिव उपाध्याय नयाँ अनुहार हुन् । यसपटकको प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनलाई सरकारले भरिसक्य समावेशी बनाउन खोजे पनि ब्राह्मण–क्षत्रीहरूको बाहुल्य रहेको भनी जनजाति वृत्तबाट आवाज पनि उठ्न पुगेको छ ।
नवगठित प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद् सदस्यमा कांग्रेसनिकट मानिने डा. दिनेशराज पन्त र प्रा.डा. उषा ठाकुर नियुक्त भएका छन् । दुवै यसअघि पनि परिषद् सदस्य थिए । यसअघि उनीहरू कांग्रेसको सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए । तर, प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा दोहोरिने चाहना राखे पनि कांग्रेसनिकट श्रवण मुकारुङ भने बाहिरिएका छन् । प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन हुनुपूर्व नेपाली लेखक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष मुकारुङ र नेपाल सांस्कृतिक संघका अध्यक्ष तीर्थ थापाले प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनका लागि आफ्नो संस्थाबाट पनि सिफारिस माग्नुपर्ने भनी वक्तव्य निकालेका थिए । सरकारले सिफारिस मागे मुकारुङले आफ्नो नाम सिफारिस गरेर दोहोरिने चाहना राखेका थिए । तर, उनको चाहना पूरा हुन पाएन । प्राज्ञ सभामा पनि यसअघि कांग्रेसको कोटाबाट परेका विवश पोखरेल र धु्रव मधिकर्मी दोहोरिएका छन् ।
यसपटक प्राज्ञ परिषद्मा पूर्वएमालेबाट कुलपति, सदस्य–सचिवसहित पाँचजना परेका छन् । परिषद्हरूमा पूर्वएमालेबाट हेमनाथ पौडेल, माया ठकुरी र देवी नेपाल परेका छन् भने पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट गोपिन्द्र पौडेल र लक्ष्मी माली परेका छन् । परिषद्मा पर्ने डा. योगेन्द्रप्रसाद यादव भने तटस्थ मानिन्छन् ।
परिषद्मा पर्ने लगभग टुंगो भइसके पनि केही स्रष्टाहरूको नाम अन्तिम समयमा आएर काटिएको बताइन्छ । त्यसमा गायत्री विष्ट, शशि लुमुम्बु र मातृका पोखरेल रहेका छन् । विष्टको त टुंगो लागिसकेको बताइन्छ । उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सद्भाव थियो भने एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विष्टलाई परिषद्मा पठाउन चाहेका थिए । दुईपटक प्राज्ञ सभामा परिसकेका उनी अन्तिम समयमा हटाइएकी थिइन् । उनलाई परिषद्मा लगेर अनुवाद विभागको जिम्मेवारी दिने टुंगो लागे पनि सोही विभाग दिने गरी डा. ठाकुरलाई दोहो¥याइएको छ ।
प्राज्ञ सभामा दोहोरिएका लुमुम्बु पनि अन्तिममा आएर नाम काटिएको बताइन्छ । उनको नाम काटेर देवी नेपाललाई ल्याइएको हो । त्यस्तै, पोखरेलले पनि परिषद्मा दोहोरिन चाहेका थिए । तर, उनलाई नल्याएर गोपिन्द्र पौडेललाई ल्याइएको छ । प्राज्ञ सभामा पोखराका सूर्य खड्का ‘बिखर्ची’ पनि परेका छन् । बेग्लै राजनीतिक दल खोलेर बसेका उनले केही समयअघि एमालेमा आफ्नो दल मिसाएका थिए । उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको गृहजिल्लावासी भएका नाताले परेका हुन् । तर, यसपटक प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन हुँदा मन्त्री अधिकारीले एकदुईजनाभन्दा बढी मानिसलाई पार्न सकेनन् ।
उपकुलपतिमा नियुक्त डा. जगमान गुरुङलाई भने ‘राजावादी’ भनेर आरोप लागेको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा २०६१ सालमा परिषद् सदस्यमा नियुक्त भएका उनले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि अरू प्राज्ञहरूसँगै राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन उपकुलपति डा. वासुदेव त्रिपाठी र परिषद् सदस्य रत्नाकर देवकोटाले राजीनामा नदिए पनि अधिकांश प्राज्ञहरू भने राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए ।
मन्त्रीको असक्षमताले मलको हाहाकार
अख्तियारभित्रै छन् अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरू
प्रहरी सरुवामा मनोमानी
गेजुवालाई च्याप्दा बुढीगण्डकी अन्योलग्रस्त
मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधनको तयारी
बाटो खुल्दा टाउकोदुखाइ
अध्यक्ष बन्ने इच्छा अधुरै
५० लाखमा कुरा नमिल्दा एआइजी जगेडामा
तीन वर्षमा पनि कछुवाकै चाल
बुद्ध जयन्तीमा विदेशमै मस्त
केयूकेएलका महाप्रबन्धक नै अवैध
रित्तिएपछि उपेन्द्रसँग गला, दमननाथ सूत्रधार
ShareTweet काठमाडौं । मन्त्री भएदेखि नै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न- ...
ShareTweet काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तको- ...
ShareTweet काठमाडौं । आफ्नो पदावधी नौ महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रहरी- ...
प्रधानमन्त्रीे युरोप भ्रमणमा
ShareTweet काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेठ २५ गतेदेखि युरोप भ्रमणमा छन् । उनी नौ दिनका लागि भ्रमणमा निस्केका हुन् । युरोपका स्विजरल्यान्ड,- ...
ShareTweet एउटा लोक–सुगन्धको गीतले केही दिनयता प्रसिद्धिको शिखर छोएको छ । त्यो गीत हो, ‘गलबन्दी च्यातियो तिम्ले च्यातेर..।’ नेपाली ग्रामीण भेगको निम्न वर्गको ऐना देखिने- ...
एउटा समाजसेवीको गाथा
ShareTweet एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘इतिहासका निर्माता भनेका जनता हुन् तर जसको इतिहासमा कुनै नाम हुँदैन ।’ यसै कुरालाई अलि संशोधन गरेर बुझ्दा इतिहास त सबैको हुन्छ तर लेखिदिने- ...
राजधानीको क्यासिनोमा गैरकानुनी हुन्डी
ShareTweet काठमाडौं । राजधानी हाल सञ्चालनमा रहेका केही क्यासिनोले- ...
सशस्त्रमा भ्रष्टको दौडादौड
ShareTweet काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ तरंग आएको छ । यसअघि- ...
ओली भोली भारत जाने
ShareTweet काठमाडौं । गत साता सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा एक्लै झन्डै- ...
Copyrights : 2014 - 2019 ebudhabar.com, All Rights Reserved